Bitmoji Deluxe: iyo nyowani nzira yekuvandudza yako Snapchat avatar | IPhone nhau
Snapchat inotangisa Bitmoji Deluxe: dzimwe sarudzo dzekugadzirisa yako avatar
Iko kushanduka kwe Instagram nyaya chiri kuve kubudirira kubvisa zvachose Snapchat senzvimbo yekudyidzana ephemeral. Kusvika parizvino, vekupedzisira vanga vachivandudza kunyorera kwavo nemabasa matsva uye matsva mwedzi wega wega uye zvaitarisirwa kuti vhiki ino vachatangisa chiitiko ichi chatichazotaura nezvacho.
Snapchat yakawedzera mune yayo app iyo Bitmoji Deluxe, nzira yekuwedzera kugadzirisa avatar yedu yatinogona kudyidzana gare gare mune kupfura kwedu. Nesystem nyowani iyi inovandudza iyo yapfuura Bitmoji, kuoneka kweiyo avatar kunogona kugadziridzwa kune zvatiri muhupenyu chaihwo kupa hunhu kuwedzera kwechokwadi.
Bitmoji Deluxe, kubheta kutsva kwaSnapchat kuti urarame
Sezvinosimbiswa nekambani, Snapchat inosanganisira nzira nyowani yekugadzirisa maavatat akadaro hunhu hwekushandisa. Ndezve Bitmoji Deluxe, sarudzo inowanikwa muBitmoji app pachayo inosanganisirwa se ndinoiitawo mune iyo Snapchat app. Aya ndiwo maitiro ayo Dhinda rekuburitsa yepamutemo social network zvemweya:
Iwe unowana akawanda mavara eganda, magadzirirwo ebvudzi, vhudzi mavara, kumeso maficha, zvishongedzo uye zvimwe zvakawanda! Kurerutsa nzira yaunosarudza panyama maficha - sekusarudza tsiye kana mhino zvinonyanya kufanana neyako - isu tichaongorora zvese izvo zvasarudzo zvakananga mu bitmoji yako. Iye zvino unogona zvakare kutora nyore selfie kukurudzira kugadzirwa kwe bitmoji yako.
Ose ekare uye mamwe maavatari anogona kugadzirwa kusvika zvino zvicharamba zviripo kunyangwe iwe ukakwidziridza kuita iyi nyowani mamiriro asi vanokurudzira kuyedza chishandiso. Kuti ukwanise kuiwana, ingoisa app, tinya pane iyo avatar uye tsvaga sarudzo yekugadzirisa avatar. Nenzira iyi, isu tinosvika kune yeBitmoji app kuti titange kushandura kutaridzika kweiyo avatar inotimiririra pasocial network.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Snapchat inotangisa Bitmoji Deluxe: dzimwe sarudzo dzekugadzirisa yako avatar
Apple iri kutsiva 16Gb mhando dzeiyo iPhone 5c ine 32Gb mamodheru
NYPD inotanga kugamuchira yekutanga iPhone 7 uye 7 Plus